China Doypack Mitsangàna paosy Manufacturers sy Suppliers | DingQi
Malamalama hitsangana paosy
Window mitsangana paosy
Matte mitsangana paosy
Kraft taratasy paosy
Foil taratasy volontsôkôlà paosy
Paper varavarankely paosy
White taratasy foil paosy
Ambany fisaka paosy
Side Gusset paosy
Telo Side Seal paosy
Child Famantarana paosy
Aluminium foil paosy
Plastic zipper paosy
Plastic fonosana paosy
Doypack Mitsangàna paosy
Mitsangàna paosy no be mpampiasa eo amin 'ny fiainana andavanandro. Afaka mahita sakafo maro toy ny kafe, ny voanjo, sakafo maivana, hen'omby jery, proteinina hery, feno lafarinina ny hitsangana amin'ny zipper paosy. Toy izany koa ankehitriny, manoratra ity lahatsoratra ity mba hampidirana hitsangana paosy.
Voalohany dia miresaka momba ny zavatra. Ny voalohany dia Kraft karazana hitsangana pouches. Avy amin'ny anarana, dia fantatrareo fa misy taratasy ara-nofo eo amin'ny paosy. Raha ny marina dia misy sosona telo, fara fahakeliny ara-nofo: Kraft taratasy / VMPET / PE na MOPP / Kraft taratasy / VMPET / PE. Hatevin'ny unprinted taratasy hitsangana paosy dia matetika 150mic. Ary ny taratasy vita pirinty Kraft hitsangana paosy, dia afaka ny ho 160mic hateviny. Ny karazany faharoa dia hitsangana pouches plastika. Ny sasany toy ny matte mpanjifa vokany, Dia toy izany matte misy mitsangana paosy. Misy vokany malamalama mpanjifa kokoa, ka misy malamalama hitsangana paosy.
Faharoa dia miresaka momba ny tsipiriany ny hitsangana paosy. Misy ambany gusset eo amin'ny paosy (ambany). Misy zipper an-tampon-paosy, izay mety aoka pouches reusable. Raha tianao hanger lavaka, dia afaka manampy teo an-tampon'ny ny paosy maimaim-poana. Misy roa karazana Hang lavaka, iray ihany no hanantonana Round lavaka. Ny karazana hafa dia Euro Hang lavaka.
Fahatelo zavatra, dia te-hiresaka momba ny fanontam-pirinty. Pouches Gravure mampiasa ny teknolojia fanontam-pirinty. Koa misy CMYK, loko fotsy sy ny toerana loko. Loko tsirairay mila ny lovia mba pirinty. Koa raha manana 6 loko, mila 6 vilia ho pirinty.
Farany, tiako niresaka momba MOQ. MOQ dia 5000pieces isaky ny zavakanto na ny habeny. Nahoana 5000pieces, tsy 4000pieces, 3000pieces na 1000pieces? Ny dingana fanaovana paosy dia tena sarotra. Misy dingana telo lehibe: 1) fanontam-pirinty, laminating amin'ny fitaovana isan-karazany sosona, cuting. Ny dingana tsirairay dia mila ny horonan-taratasy lehibe sarimihetsika mba mifamadika ny milina. Paosy cant ho tsirairay. Na dia tianao kitapo iray ihany, ny dingana dia mitovy. Toy izany koa ny asa sy ny vola lany jiro lalao ara-nofo dia mitovy. Ary ny vidin'ny tanteraka ho iray kitapo isnt samy hafa be amin'ny fanaovana 5000pieces paosy.
Post fotoana: Apr-25-2019
Adiresy: Room 266, 2 Floor, QingShuiWan, No. 7-1 TangKeng Road, LongGang, Shenzhen, 518115, Sina
Vitsivitsy Kraft safidy ny taratasy kitapo
Ny tombony azo amin'ny fisaka ambany harona
Lafiny telo tombo-kase kitapo
side gusset kitapo
Copyright © 2019 Zo rehetra voatokana.
Clear Mijoroa Up Pouches , Mijoroa paosy Bags , Mijoroa Up paosy fonosana plastika , Kraft Paper Resealable Bags , Mijoroa paosy fonosana , Clear Plastic Mijoroa Up Pouches ,